Android အတွက်အကောင်းဆုံးလယ်ယာဂိမ်းလေးခု | Androidsis
လယ်ယာဂိမ်းကစားခြင်းသည်လူကြိုက်များမှုများစွာရရှိခဲ့သည် နှစ်တွေ။ ဒီကျော်ကြားမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု သူတို့က Facebook ကိုကြွေး, လူမှုရေးကွန်ယက်ထဲမှာကတည်းကကျနော်တို့ကဒီဆောင်ပုဒ်တစ်ခုဂိမ်းရှာပါ။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိသန်းပေါင်းများစွာသောသုံးစွဲသူများကိုချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့ဂိမ်း။ ထို့အပြင်စိတ်ပျက်စရာဖိတ်ကြားချက်ကိုတစ်ယောက်ထက် ပို၍ မှတ်မိနေလိမ့်မည်။
ဒါပေမယ့်ဒီအမျိုးအစားကလူမှုကွန်ယက်ကိုချန်ထားခဲ့တယ်။ အခုငါတို့ရှာတွေ့နိုင်တယ် Android အတွက်ရနိုင်သောလယ်ယာဂိမ်းများစွာ။ ၎င်းကိုမြင်တွေ့ရန် Play Store မှတဆင့်လမ်းလျှောက်ရုံသာကြည့်ပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားအောက်တွင်ထားခဲ့ပါ အကောင်းဆုံးကိုရွေးချယ်ခြင်း ငါတို့ဘာရှာတွေ့နိုင်မလဲ။
ဤနည်းအားဖြင့်ဤဂိမ်းအမျိုးအစားကိုစိတ်ဝင်စားသူအားလုံးအတွက် \_ t ရှာဖွေမှုအများကြီးပိုမိုလွယ်ကူသည်။ Android အတွက်ရရှိနိုင်သည့်ဂိမ်းကစားနည်းအားလုံးကိုသင်ရှာဖွေရန်မလိုတော့ပါ။ ဤစာရင်းတွင်နေရာတစ်ခုရထိုက်သည့်ဂိမ်းများနှင့်အတူပါ ၀ င်သည်။
1 FarmVille 2: ကျေးလက်ဒေသထွက်ပေါက်
3 hay နေ့!
FarmVille 2: ကျေးလက်ဒေသထွက်ပေါက်
ကျနော်တို့စာရင်းထဲကတစ်ခုနှင့်အတူစတင်ပါ လူသိအများဆုံးခေါင်းစဉ်များအကောင်းဆုံးဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ အကယ်စင်စစ်သင်တို့အများစုကဒီဂိမ်းကိုငါသိ၏။ အတူတူပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တတ်နိုင်ပါလိမ့်မည် တိရိစ္ဆာန်များမွေးမြူခြင်း, ချက်ပြုတ်နည်းများပြင်ဆင်, အထူးအရာဝတ္ထုရှာဖွေပါ နှင့်အခြားလှုပ်ရှားမှုများ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အစားအစာအားလုံးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန်အတွက်သမဝါယမတစ်ခုဖန်တီးရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ သူငယ်ချင်းများ၊ အိမ်နီးချင်းများနှင့်အတူဖြစ်နိုင်သည်
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသီးနှံရိတ်သိမ်းနိုင်စွမ်းကိုပေးသည် အချိန်တိုင်း။ ဖြစ်နိုင်သည်အမျိုးအစားအတွက်အများဆုံးဂန္နှင့်မရှိမဖြစ်ဂိမ်း။ The ဒီဂိမ်းကို download လုပ်ပါ အန်းဒရွိုက် ဒါကအခမဲ့ပါ။ ကျနော်တို့အတွင်းပိုင်းဝယ်ယူမှုကိုရှာဖွေပေမယ့်။
ဒီဂိမ်းမှာတော့ ကျနော်တို့အပူပိုင်းပရဒိသုသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့လယ်ယာတည်ရှိလိမ့်မည်ဘယ်မှာ။ ဒါကြောင့်အတော်လေးအထူးလယ်ယာဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခြံအပြင်ကျွန်းတစ်ကျွန်းလုံးလည်းရှိသည် ငါတို့အဘို့။ ဒါပေမယ့်ဒီ ကျွန်းသည်နက်နဲသောအရာများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ဂိမ်းကိုပိုပြီးဖျော်ဖြေမှုဖြစ်စေတဲ့အရာတစ်ခုရဲ့အမျိုးအစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလောက်ပြောတာပါ။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, ကျွန်တော်တို့ကိုရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များယဉ်ဖို့ option ကိုပေးသည် ခြင်္သေ့တွေ၊ သစ်ကုလားအုတ်တွေ၊ ဒီကျွန်းပေါ်မှာငါတို့ကိုယ်ပိုင် spa ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ The ဒီဂိမ်းကို Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည်။ အတွင်းပိုင်းကျနော်တို့ဝယ်ယူမှုကိုရှာပေမယ့်။
ရေးသားသူ: foranj - လယ်ယာမြေနေ့ဂိမ်းများနှင့်ပရဒိသုမြို့နယ်ဟိုတယ်များ
လယ်ယာဂိမ်းထဲမှာလူကြိုက်အများဆုံးခေါင်းစဉ်၏နောက်ထပ်။ ၎င်းသည် Android တွင်အလွန်လူကြိုက်များသောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့လယ်ယာကိုဂရုစိုက်ရမယ်၊ သူငယ်ချင်းတွေ၊ အိမ်နီးချင်းတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ရမယ်။ ကြှနျုပျတို့ ... လုပျရမညျ ကောက်ပဲသီးနှံများနှင့်တိရိစ္ဆာန်များကိုအထူးဂရုစိုက်ပါ။ ဒီဂိမ်းကကျွန်တော်တို့ကိုပေးတယ် လယ်ယာစိတ်ကြိုက်ဖို့ option ကို ငါတို့လည်းဒါကိုချဲ့နိုင်ပါတယ်
ဤအရာအားလုံး၏ထိပ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်တဲများရှိပြီးအခြားကစားသမားများနှင့်သီးနှံများကိုရောင်း ၀ ယ်နိုင်သည်။ နောက်ထပ်သွားရန်, ဂိမ်းကျွန်တော်တို့ကို option ကိုပေးသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မြို့တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် visitors ည့်သည်များလက်ခံရရှိသည်။ သင်ဤအမျိုးအစားနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းဂိမ်း၏နောက်လိုက်တစ် ဦး ဖြစ်လျှင်၎င်းသည်စဉ်းစားရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ Android အတွက်ဂိမ်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်အတွင်းဝယ်ယူမှုရှိပါတယ်ပေမယ့်။
ကျနော်တို့ကဒီဂိမ်းနှင့်အတူစာရင်းပိတ်။ ၎င်းသည်လယ်ယာဂိမ်းများတွင်လူသိအနည်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ဘယ်သူ့အကောင်းဆုံးလယ်သမားလဲဆိုတာသိဖို့သူငယ်ချင်းတွေ၊ အိမ်နီးချင်းတွေနဲ့ယှဉ်ပြိုင်ရမယ်။ ကျနော်တို့လယ်ယာအပေါ်အများအပြားလှုပ်ရှားမှုများရှိသည်။ သူတို့တွင် ကောက်ပဲသီးနှံများနှင့်တိရိစ္ဆာန်များကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ကောက်ပဲသီးနှံများရောင်းခြင်း အကျိုးခံစားခွင့်များရရန် ဂိမ်းဒီဇိုင်း ၎င်းသည်ကွဲပြားခြားနားသောကြောင့်၎င်းသည်အထင်ရှားဆုံးသောရှုထောင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီဂိမ်းကို Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည်။ ပြီးခဲ့သည့်ဖြစ်ရပ်များ၌ရှိသကဲ့သို့, ငါတို့အထဲမှာဝယ်ယူမှုကိုရှာဖွေပေမယ့်။
ရေးသားသူ: Century အားကစားပြိုင်ပွဲ Pte ။ Ltd.
ဤများမှာ Android မှာရှာတွေ့နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးဂိမ်းလေးခု။ ဤရွေးချယ်မှုသည်သင်အတွက်စိတ် ၀ င်စားစရာဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင်၏အကြိုက်ဆုံးကိုသင်၏မိုဘိုင်းဖြင့်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်မတွန့်ဆုတ်ပါ။ ဒီရွေးချယ်မှုတွေကိုမင်းဘယ်လိုထင်သလဲ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » Android အတွက်အကောင်းဆုံးစိုက်ပျိုးရေးဂိမ်းများ
ထိုအ Stardew ချိုင့်?
Honor 8 Pro သည် Android Oreo သို့အဆင့်မြှင့်တင်သည်
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် Facebook ၏တရားဝင်အချက်အလက်များ